Rovan`i Manjakamiadana “Hohajaina ny fe-potoana hamitana ny asa ”
Hetsika famoriam-bahoaka Mbola nisy nisokatra ihany
Taorian` ny fanambarana nataon` ny filoham-pirenena ny zoma lasa teo momba ny fisian'ny trangan’aretina Coronavirus (Covid 19) eto Madagasikara amin’izao fotoana izao fa voarara ny hetsika famoriam-bahoaka dia samy nanao ny andraikiny mifanandrify amin` izany ireo fiangonana. Nanao fanambarana ny fivondronamben' ny eveka, ny FFKM, ny adventista…
Fikitihana tsy am-piheverana ny Rova Velon’ ahiahy ny UNESCO
Nilaza ny heviny mahakasika ny fikitihana sy ny fanamboarana ny Rovan’i Manjakamiadana niantefa tamin’ny Ambasadaoro mandehandeha sady Delege
Seho anaty trano Mbola tsy mahasarik’olona firy ny Sarimihetsika Malagasy
Nampahafantarina sy nojerena tamin’ny sabotsy lasa teo tetsy amin’ny OpenFlex Ambodivona ny sarimihetsika fahatelo mahakasika ilay ny tetikasa Ciné Malagasy découverte. Isaky ny sabotsy faran’ny volana no fampisehoana izany izay ahafahana mijery ireo talenta vaovao amin’ny sarimihetsika Malagasy.
Tsikera momba ny fikitihana vako-pirenena Malalaka ny fanehoan-kevitra, hoy i Augustin Andriamananoro
Manoloana ny tsikera fa manao tsinontsinona vako-pirenena ny fitondrana ankehitriny dia nilaza ny tale mpanatanteraka ny tetikasan’ny filoham-pirenena,
Rovan’Antananarivo Ho tokanana amin’ny 26 jona 2020
Ny 26 jona 2020 , izany hoe amin’ny fankalazana ny faha 60 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara no ho tokanana ny Rovan’Antananarivo eny
Fampisehoan-dry AmbondronA Tafahaona ny tia sy ny manina !
Fahombiazana ! Izay no azo ilazana ny fampisehoana nataon'ny tarika Ambondrona,
Rock Malagasy Tena ilaina ny famoronana
Olana hatrany ny famoronana na dia betsaka aza ireo manan-talenta hoy ny tarika Ziv mpiangaly ny mozika Rock tetsy amin’ny Telozoro Andrefan’Ambohijanahary.
“Tsy maintsy ho vita mialoha ny 26 jona 2020 ny rovan`i Manjakamiadana.
Fanamby efa napetraka ny hamerenana amin`ny endriny fahiny ity vakoka reharehantsika ity”, hoy ny filoha Rajoelina nandritra ny lahateniny tamin`ny 11 aprily 2019. Nijery ny fizotran`ny asa moa ny minisiteran`ny serasera sy ny kolontsaina ny sabotsy lasa teo. Ho tratra ny fe-potoana hamitana ny lapan`i Manjakamiadana. Efa ao anatin`ny famaranana ny asa ny orinasa misahana fanarenana, hoy i Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo. Nasongadin`ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina tamin`izany fa hajaina araka ny fepetra napetraky ny komity siantifika ny fanatanterahana ny asa. Manara-maso ny fanamboarana taotrano, eo ihany koa ny fanamafisana ny fepetra momba ny aroloza. Reharehan`i Madagasikara iray manontolo tokoa ny rovan`i Manjakamiadana ary ahafantarana antsika maneran-tany. Nihaona manokana tamin’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina tamin’io sabotsy ireo olona mpiambina ny rova izay miisa 6 moa. Fantatra fa tsy nandray karama izy ireo nanomboka tamin’ny 2017, nomena manontolo ny karama tsy voaray hatramin’izay ary nambara ihany koa fa horaisina mpiasam-panjakana ary ampidirina ho anisan’ny mpiasa eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny kolontsaina izy ireo. Anisan’ny tanjon’ny fitondrana izay mijoro ankehitriny moa ny fitokanana ity rova ity amin’ny fankalazana ny fetim-pirenena ka hovitaina mialoha izay ity fotodrafitrasa ity. Voalaza moa fa notazomina avokoa ny endri- panorenana na “architecture” amin’izao fanavaozana sy fanarenana ny rova sy ny lapan’i Manjakamiadana. Ny fijerena baolina eo Mahamasina sy ny rova no ilofosan’ny fitondrana hovitaina mialoha ny 26 jona ho avy izao.
Marigny A. sy Haja Nirina